Abrasion and prevent - İngilizce - Birmanca Çeviri ve Örnekler
Şunu aradınız:: abrasion and prevention of cfb boiler (İngilizce - Birmanca)
အမေရိကန်အစိုးရ၏ ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးဌာန
The Center For Disease Control and Prevention in USA tracks the travel information of individuals using airline passenger data.
အမေရိကန်ရှိ ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ကာကွယ်ရေး စင်တာက လေကြောင်းခရီးသည်ဒေတာကို အသုံးပြု၍ သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ခရီးသွား အချက်အလက်များကို ခြေရာခံလျက်ရှိသည်။
Identifying the animal hosts has direct implications in the prevention of human diseases.
လက်ခံကောင် တိရိစ္ဆာန်များကို ဖော်ထုတ်ခြင်းက လူသား ရောဂါများကို ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့် တိုက်ရိုက်ပတ်သက်မှု ရှိပါသည်။
A study published by the US Center for Disease Control and Prevention has concluded that it may be 5.7.
အမေရိကန် ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးဗဟိုမှ ထုတ်ဝေသော လေ့လာမှုတစ်စောင်တွင် ၎င်းသည် 5.7 ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ကောက်ချက်ချထားသည်။
We will cover the basics about the epidemiology, etiology, virology, diagnosis, treatment, prognosis, and prevention of the disease.
ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ကပ်ရောဂါကို လေ့လာခြင်း၊ ရောဂါအကြောင်းရင်းကို လေ့လာခြင်း၊ ဗိုင်းရပ်စ်ကို လေ့လာခြင်း၊ ရောဂါဖော်ထုတ်ခြင်း၊ ကုထုံး၊ ရောဂါအခြေအနေသုံးသပ်ချက်နှင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းစသည့် အကြောင်းအရာများ ခြုံငုံပါဝင်အောင် လုပ်ဆောင်ပါမည်။
Correct handwashing technique recommended by the US Centers for Disease Control for prevention of transmission of disease includes the following steps:
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရောဂါများ ကူးစက်မှု တားဆီးရေးအတွက် ရောဂါထိန်းချုပ်ရေး စင်တာများ (US Centers for Disease Control) က အကြံပြုထားသော မှန်ကန်သော လက်ဆေးနည်းတွင် အောက်ပါ အဆင့်များ ပါဝင်သည်။
In the 1980s, foodborne outbreaks and healthcare-associated infections led the United States Centers for Disease Control and Prevention to more actively promote hand hygiene as an important way to prevent the spread of infection.
1980 ခုနှစ်များတွင် အစာမှ ကူးစက်သော ကူးစက်ရောဂါ ပြန့်ပွားမှုများနှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့် သက်ဆိုင်သော ကူးစက်ရောဂါများသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ရောဂါ ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် တားဆီးကာကွယ်ရေး စင်တာများကို ရောဂါကူးစက် ပြန့်နှံ့မှုကို ကာကွယ်ရန် အရေးကြီးသည့် နည်းလမ်းအဖြစ် လက်သန့်ရှင်းရေး ကို တက်ကြွစွာ ပိုမို တိုက်တွန်းစေခဲ့သည်။
For schools and childcare facilities, the U.S. Centers for Disease Control and Prevention recommends short-term closure to clean or disinfect if an infected person has been inaschool building regardless of community spread.
ကျောင်းများနှင့် ကလေးထိန်းကျောင်းများအနေဖြင့် အကယ်၍ ကူးစက်ခံရသူတစ်ဦး ကျောင်းအဆောက်အအုံတစ်ခုအတွင်း ရောက်ရှိခဲ့ဖူးပါက လူထုကြား ပျံနှံ့မှု ဖြစ်နိုင်သည်ဖြစ်စေ မဖြစ်နိုင်သည်ဖြစ်စေ ကျောင်းကို ကာလတို ပိတ်ထားပြီး သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရန် သို့မဟုတ် ပိုးသတ်ခြင်းလုပ်ငန်းများပြုလုပ်ရန် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး စင်တာများမှ တိုက်တွန်းပြောကြားသည်။
Workplace hazard controls for COVID-19 are the application of occupational safety and health methodologies for hazard controls to the prevention of coronavirus disease 2019 (COVID-19).
COVID-19 အတွက် လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ် ထိန်းချုပ်မှုများ မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ရောဂါ 2019 ( COVID-19) ကာကွယ်ခြင်းအတွက် ဘေးအန္တရာယ် ထိန်းချုပ်မှုများ အတွက် လုပ်ငန်းခွင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့် ကျန်းမာရေး နည်းလမ်းများကို အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။
Finger tips must be washed well too, rubbing them in both palms.The US Center for Disease Control and Prevention recommends hand washing over hand sanitizer rubs, particularly when hands are visibly dirty.
လက်ဖဝါးနှစ်ဖက်လုံးဖြင့် ပွတ်တိုက်ပေးခြင်းဖြင့် လက်ချောင်းထိပ်များကိုလည်း ဆေးကြောပါမည်။ US ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ကာကွယ်တားဆီးရေးစင်တာသည် လက်များ သိသိသာသာ ညစ်ပေနေသည့်အခါ၊ လက်သန့်ဆေးရည်ဖြင့် ပွတ်တိုက်သန့်ရှင်းခြင်းအစား လက်ဆေးရန် အကြံပြုထားပါသည်။
The World Health Organization and Centers for Disease Control and Prevention of the United States advises pregnant women to do the same things as the general public to avoid infection, such as covering cough, avoid interacting with sick people, cleaning hands with soap and water or sanitizer.
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းနှင့် အမေရိကန်ပြန်ထောင်စု ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးဗဟိုဌာနတို့က ကိုယ်ဝန်သည် အမျိုးသမီးများအား ရောဂါကူးစက်မှုကို ရှောင်ကြဉ်နိုင်ရန်အတွက် ဖုံးအုပ်ကာ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ ဖျားနာနေသူများနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကို ရှောင်ရှားခြင်း၊ လက်ကို ဆပ်ပြာနှင့်ရေ သို့မဟုတ် လက်သန့််ဆေးရည်ဖြင့် ဆေးခြင်းစသည်တို့ကို အများသူငါတို့ကဲ့သို့ပင် ပြုလုပ်ကြရန် အကြံပြုထားပါသည်။
၎င်းက ရောဂါလက်ခံနေရာရှာဖွေရန်၊ SARS-CoV-2 ၏ အလယ်အလတ်အဆင့်နှင့် တိုးမြှင့်ကူးစက်သည့် ရောဂါလက်ခံသည့် တိရစ္ဆာန်(များ)၊ အနာဂတ်ကူးစက်မှုများကိုကာကွယ်ရန် အရေးကြီးသည့် ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းများအတွက် လမ်းညွှန်ခြင်း သို့မဟုတ် ပံ့ပိုးပေးခြင်းကိုလည်း လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
The proportion of infected people who do not display symptoms is currently unknown and being studied, with the Korea Centers for Disease Control and Prevention (KCDC) reporting that 20% of all confirmed cases remained asymptomatic during their hospital stay.
ရောဂါလက္ခဏာမပြသဘဲ ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရသူ အချိုးမည်မျှ ရှိသည်ကို လောလောဆယ် မသိရှိရသေးဘဲ လေ့လာနေဆဲဖြစ်ပြီး ကိုရီးယား ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ကာကွယ်ရေး စင်တာ (Korea Centers for Disease Control and Prevention, KCDC) က ပိုးရှိကြောင်း အတည်ပြု ထားသူ အားလုံး၏ 20% သည် ဆေးရုံတွင် နေထိုင်စဉ်ကာလအတွင်း ရောဂါလက္ခဏာ ပြသခြင်းမရှိကြောင်း အစီရင်ခံ တင်ပြ ထားသည်။
ယင်းသည် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဘီတာအားလုံးအားဖြင့် “E” မျိုးဗီဇအတွက် ကြည့်ရှုခဲ့ပြီး SARS-CoV-2 ဗိုင်းရပ်စ်အတွက် သီးသန့် မျိုးရိုးဗီဇ RdRp ဖြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံတွင် BGI အုပ်စုသည် PCR အခြေပြု SARS-CoV-2 စမ်းသပ်သည့် ပစ္စည်းစုံများအတွက် တရုတ် အမျိုးသားဆေးဖက်ဆိုင်ရာ ကုန်ပစ္စည်းများ အုပ်ချုပ်ရေးက အရေးပေါ်အသုံးပြုမှုအတွက် အတည်ပြုမှုကို ရရှိခဲ့သည့် ပထမဆုံး ကုမ္ပဏီ ဖြစ်သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ရောဂါ ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ကာကွယ်ရေး စင်တာများ (CDC) က ယင်း၏ 2019-နိုဗဲလ် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (2019-nCoV) အမှန်အချိန် RT-PCR ဓါတ်ခွဲ ရှာဖွေမှု ပင်နယ် ကို လူထု ကျန်းမာရေး ဓါတ်ခွဲခန်းများသို့ နိုင်ငံတကာ ဓာတ်ပြုမှု အရင်းအမြစ်က တဆင့် ဖြန့်ဝေပေးခဲ့သည်။
The U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recommends that employees who have symptoms of acute respiratory illness are to stay home until they are free of fever, signs ofafever, and any other symptoms for at least 24 hours without the use of fever-reducing or other symptom-altering medicines, and that sick leave policies are flexible, permit employees to stay home to care forasick family member, and that employees are aware of these policies.
အမေရိကန် ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ကာကွယ်ရေး စင်တာများ (CDC) က ရုတ်တရက် အသက်ရှူလမ်းကြောင်း နာမကျန်းမှု လက္ခဏာများရှိသော ဝန်ထမ်းများသည် အဖျားကျဆေးနှင့် သို့မဟုတ် အြခါး လက္ခဏာများကို ပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများ သုံးစွဲခြင်း မရှိပဲ ကိုယ်ပူချိန် မြင့်မားမှု၊ ကိုယ်ပူချိန် မြင့်မားသည့် လက္ခဏာများ၊ နှင့် အခြားသော ရောဂါလက္ခဏာများ အနည်းဆုံး 24 နာရီကြာအောင် မရှိသည့် တိုင်အောင် အိမ်တွင် နေထိုင်ရန် နှင့် နာမကျန်းခွင့် မူဝါဒများ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိစေရန်၊ ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် နာမကျန်း ဖြစ်သော မိသားစုဝင်များကို အိမ်တွင်နေထိုင်၍ ပြုစုနိုင်ရန် နှင့် ၎င်းမူဝါဒများကို ဝန်ထမ်းများ သိရှိစေရန် တိုက်တွန်းထားသည်။
&quot; A spokeswoman for the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) acknowledged &quot;&quot;We know that [the stated death toll] is an underestimation&quot;&quot;,astatement corroborated by anecdotal reports of undercounting in the U.S. Such underestimation often occurs in pandemics, such as the 2009 H1N1 swine flu epidemic.The first confirmed death was in Wuhan on9January 2020. &quot;
အမေရိကန် ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ကာကွယ်ရေး ဗဟိုဌာန (CDC) မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ အမျိုးသမီးက “သေဆုံးသူအရေအတွက်သည် လျှော့ပေါ့ တွက်ထားခြင်းဖြစ်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် သိရှိသည်” ဟု ဝန်ခံခဲ့သည်။ အမေရိကန်တွင် လျှော့ပေါ့တွက်ချက်မှုများ ပြုလုပ်နေပြီး မရေရာသည့် သတင်းပို့တင်ပြချက်များကလည်း အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်အား ခိုင်မာစေသည်။ 2009 ခုနှစ် H1N1 ဝက်တုပ်ကွေးကပ်ရောဂါကာလကဲ့သို့ ကပ်ရောဂါ ကာလများအတွင်းတွင် ထိုသို့ လျှော့ပေါ့တွက်ချက်ခြင်းများ မကြာခဏ ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။ ပထမဆုံးအတည်ပြုလူနာသေဆုံးမှုသည် ဝူဟန်မြို့တွင် 2020 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
The U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) lists emergency symptoms as difficulty breathing, persistent chest pain or pressure, sudden confusion, difficulty waking, and bluish face or lips; immediate medical attention is advised if these symptoms are present.Further development of the disease can lead to severe pneumonia, acute respiratory distress syndrome, sepsis, septic shock and death.
အမေရိကန် ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ကာကွယ်ရေး စင်တာများ (CDC) က အရေးပေါ် လက္ခဏာများအဖြစ် အသက်ရှူရ ခက်ခဲခြင်း၊ တောက်လျောက် ရင်ဘတ်နာခြင်း သို့မဟုတ် ဖိအားခံစားရခြင်း၊ ရုတ်တရက် စိတ်ရှုတ်ထွေးခြင်း၊ အိပ်ရာထ ခက်ခဲခြင်း၊ နှင့် မျက်နှာ သို့မဟုတ် နှုတ်ခမ်းများ ပြာနှမ်းခြင်း။ အကယ်၍ ထို လက္ခဏာများ ရှိက ဆေးဖက်ဆိုင်ရာ စောင့်ရှောက်မှုကို ချက်ချင်းရယူရန် အကြံပြုသည်။ နောက်ထပ် ရောဂါ၏ တိုးတက်ဖြစ်ပေါ်မှုသည် ပြင်းထန်သော နမိုးနီးယား၊ ရုတ်တရက် အသက်ရှူခက်ခဲခြင်း ရောဂါ လက္ခဏာစု၊ ပြည်တည်ခြင်းနှင့် သွေးဆိပ်ကြောင့် ရှော့ရခြင်းနှင့် သေဆုံးခြင်းအထိ ဖြစ်နိုင်သည်။
On9January 2020, the China Center for Disease Control and Prevention reported the causative agent as beinganovel coronavirus now referred to as severe acute respiratory syndrome coronavirus2(SARS-CoV-2).
2020 ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ9ရက်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ (China) ရောဂါကာကွယ်ရေးနှင့် ထိန်းချုပ်ရေးဗဟိုက ယခုအခါ ပြင်းထန်သော အသက်ရှူ လမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်2(SARS-CoV-2) ဟု ခေါ်ဆိုသည့် နိုဗယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ ဖြစ်စေသော ပစ္စည်းကို တွေ့ရှိရကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
&quot; According to Dr. Tom Frieden, formerly the director of the United States' Centers for Disease Control and Prevention, the pandemic is &quot;&quot;unprecedented.&quot;&quot; &quot;
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးစင်တာ ညွှန်ကြားရေးမှူးဟောင်း Dr. Tom Frieden ၏ အဆိုအရ ကူးစက်ရောဂါသည် “တစ်ခါမျှမကြုံဖူးသည့်အရာ” ဟု ဆိုသည်။
no girlfriend no tension (İngilizce>Hintçe)beschränktes (Almanca>Vietnamca)mitäs mies (Fince>İngilizce)giloy powder in gujrati (İngilizce>Gujarati)wala ko kauyon (Tagalogca>İngilizce)lagos (Lehçe>İngilizce)kya baja raha hai (Hintçe>İngilizce)congratulations (İngilizce>Bulgarca)pigna (İspanyolca>İngilizce)effort never dies (İngilizce>Bengalce)pacatae (Latince>İngilizce)paragraph writing my school (İngilizce>Fransızca)amin sikim (Türkçe>Almanca)hwz u (İngilizce>Gujarati)onuposthitir jonno abedon (İngilizce>Bengalce)streak (İngilizce>Svahili)why did you unsend that msg? (İngilizce>Hintçe)hello my name is ella i am4years old (İngilizce>Fransızca)j'ai un chat noir (Fransızca>İngilizce)pressaafeltri (İtalyanca>Almanca)gaia vaia (İtalyanca>İngilizce)yes dear, i (İngilizce>Arapça)gujarati essay about rashtriya ekta (İngilizce>Gujarati)comforter of the afflicted (İngilizce>Tagalogca)chabi pana nat bolt (Hintçe>İngilizce)